Mampatavy antsika ny ray sy renintsika
Voataiza mba hatavy isika
Efa hatramin’ny fahazazana isika no nahazo, tsy nahy, ohatra ara-pihetsika sy fanabeazana ara-kolotoraly izay nampatavy antsika. Noho izany, ny tena nampatavy antsika dia :
1) Mangala-tahaka ny ohatry ny ray aman-drenintsika
Mamerina ny ohatra ara-pihetsika izay nomen’ny ray aman-drenintsika antsika tamin’ny fahazazantsika isika. Ny ankizivavy dia manaraka ny fihetsin’ny reniny ary ny ankizilahy ny fihetsin’ny rainy.
Noho izany, ny fihetsika rehetra, izay tsy niniana, ataon’ny reny dia arahin’ny zanaka vavy any amin’ny hatanorany, na dia tsy fanahy iniana aza izany.
Raha mahita ny reniny manao maquillage sy jejojejo ny ankizivavy, dia hilalao maquillage izy sady tsy mitsahatra ny hijerijery fitaratra.
Ny ankizivavy izay mahita an-dreniny manao régime dia hanao régime ihany koa rehefa tanora. Satria hoheveriny fa fomba fisakafohanana normal izany manao régime izany.
Raha mahita an-dreniny milanja isan’andro ny ankizivavy iray dia hitandrina be ny lanjany izy amin’ny hatanorany, na ho lasa obsédée amin’io lanjany io mihitsy aza. Satria hihevitra izy fa ratsy ny mitombo, ary normal ny mitandrina ny habeany.
Noho izany, ny manaraka ny ohatra tsara na ratsy omen’ny ray aman-dreny antsika isika, indrindra raha toa ka matavy izy ireo. Oh : manao régime, mitaintaina amin’ny lanja sy obsedé(e) amin’izany, tsy manao fanatanjahantena, mihomehy sy mifosa, ary mankahala ny olona matavy, …
Hadihadio ny ohatra ara-pihetsika azonao
Nilanja teo imasonao ve ny reninao/rainao ?
Nanao régime ve ny reninao/rainao ?
Nampiasa vokatra lazaina fa mampihena ve ny reninao/rainao ? Oh : Thé minceur, savony mampihena, menaka mampihena, tambavy mampihena, …
Efa nimenomenona momba ny lanjany teo imasonao ve ny reninao/rainao ?
Efa nimenomenona momba ny bikany teo imasonao ve ny reninao/rainao ?
Nilalao faritra iray tamin’ny vatany teo anoloana fitaratra ve ny reninao/rainao ? Oh : ny kibony, ny sandriny, …
Efa nanontany anao ve ny reninao/rainao fa nihanatavy ve izy ?
Efa nanontany anao ve ny reninao/rainao mba hampitaha azy amin’ny olona iray izay hitany fa « sexy » ? Oh : Matavy noho izy ve aho ? Sexy noho izaho ve izy ? Ngeza noho ny feany ve ny feako ?
2) Tian’ny ray aman-drenintsika hatavy isika
Teren’ny ray aman-drenintsika isika mba ho toa ny zanaka izay niriany hananana. Betsaka ny ray aman-dreny izay manery ny zanany ho tonga dokotera, mpisolo vava, mpitsara, … nefa tsy miraharaha izay tena tian’ny zanany. Tsy mitranga any amin’ny asan’ny zanany fotsiny izany anefa, fa any amin’ny bikan’ny vatan’ny zanany ihany koa. Betsaka aza ny ray aman-dreny izay kivy sy mitebiteby satria mahia loatra ny zanany, araka ny fahitany azy. Tereny hihinan-kanina io zanany io na dia tsy noana aza izy.
Misy namako hatramin’ny fahazazako izay miferotr’aina noho ny fivoharan’ny lanjan’ny zanany lahy vao tsy ampy taona iray. Satria hitany fa kely noho ny zanaky ny rahavaviny ny zanany. Tereny hinono foana io zaza io ary tsy tian’ilay zanany izany. Ny niafarany dia lasa tsy tia nono sy biberon ilay zaza. Tsy nahita aretina anefa ny pédiatre. Tsy nahita zavatra tokony hampiahiahy akory izy. Tsy noana fotsiny ilay zaza. Kivy foana io namako io isaky ny mahita ny « fe keliny » araky ny filazany azy. Kivy foana izy isaky ny mahita sarin-jazakely botrefona kely. Ary miteny izy hoe : « Rahoviana ary ny zanako vao ohatr’izao ? »
Mahatsapa-tena voakasik’io ohatra io ve ianao ? Mahafinaritra anao ve ny mahita zaza kely botrefona kely na matavy be ? Efa nanery tena hihinan-kanina be dia be ve ianao mba hampifalifaliana an’i dada sy neny ?
Hadihadio raha noterena hatavy ianao
Nanery anao hanao régime ve ny reninao/rainao satria hitany fa ngeza loatra noho ny tiany ianao ?
Nanery anao hampiasa vokatra voalaza fa mampahia ve ny reninao/rainao satria hitany fa ngeza noho ny tiany ianao ? Oh : savony mampahia, menaka mampahia, tambavy na dite mampahia, ranona poarao, …
Efa nitsikera ny bikanao ve ny reninao/rainao ? Oh : Matavy loatra ianao, mahia loatra ianao, …
Niferotr’aina noho ny lanjanao ve ny reninao/rainao ? Oh : Ngeza loatra na kely loatra ianao ho azy.
Tezitra ve ny reninao/rainao satria tsy nihinan-kanina araka ny tiany ianao ?
Nampiseho anao ny hakiviany ve ny reninao/rainao rehefa tsy mihinan-kanina araka ny tiany ianao ?
Nampitahotra anao fa tsy ho tiany intsony ianao ve ny reninao/rainao mba hihinanao hanina ? Oh : Raha mbola misy ambiny eo am-bilianao dia tsy tiako intsony ianao. Na tsy zanako intsony ianao raha tsy manampitra ny eo am-bilianao.
3) Atosiky ny ray aman-drenintsika mba hatavy isika
Iza no efa naheno ilay fiteny matetika hoe : « lanio daholo ny eo am-bilia » na hoe « aza mamela sisa » satria « misy olona maro tsy misakafo any ivelan’ny trano any na any Antsimo any » na satria « tsy fahalalam-pomba ny mamela sisa » ? Ireny fiteny izay ampiasain’ny ray aman-dreny mba hanerena antsika tsy hamela sisa eo am-bilia na dia tsy noana intsony aza isika. Nefa, mahatsikaiky kely, tsy hanampy ny olona ivelan’ny trano na any Antsimo hihinan-kanina ny fihinanana izany. Fantatro fa ny tena anton’izany dia ny fanehoana fanajana ireny olona izay matin’ny hanohanana ireny. Nefa ve ny fisesefanao hanina dia maneho fanajana an’ireny olona ireny ?
Iza taminareo no efa voateny hoe « hano ny legioma eo am-bilianao io fa tsara ho an’ny fahasalamana io » na « raha tsy mihinana an’io legioma io ianao tsy omeko desera » ? Fampitahorana izay ataon’ny ray aman-dreny mba hanerena antsika hihinana izay tsy tiantsika. Nefa ny fiantraikan’izay dia lasa tsy tiantsika ilay sakafo. Na lasa fihetsintsika izany : lasa manery tena isika hihinana sakafo tsy tiana satria misy milaza fa ara-pahasalamana ireny na hoe mampahia na mampihena. Izay no manosika antsika hanery tena hihinan-kanina tsy noho ny hanohanana fa noho ny fitiavana hihena na hahia na ho salama.
Nahazo fanabeazana toa izany isika ary mitondra ny fiantraikan’izany mandrapahafaty. Ary matetika aza mbola ampianarintsika ny zanantsika sy ny zafikelintsika ihany koa ireny tsindrihazolena ireny. Ka dia mahatonga antsika hanery tena hihinana ny hanina rehetra izay eo am-biliantsika fa tsy miraharaha akory ny fatra tena ilain’ny vatana izany. Ary ny tena mahasosotra dia terentsika hanao toa izany koa ny manodidina antsika.
Hadihadio ny fanerena izay mampatavy anao
Nanery anao tsy hamela sisa mihitsy ve ny reninao/rainao ? Oh : Raha mbola misy ambiny ny eo am-bilianao dia tsy mahazo mihetsika eo ianao. Na raha tsy tapitra ny eo am-bilianao, tsy mahazo milalao ianao.
Nanery anao hisakafo ve ny reninao/rainao satria efa tonga ny ora fisakafohanana ?
Nanery anao hihinana sakafo ve ny rainao/reninao ? Oh : karaoty, pitipoa, …
4) Nampianatra antsika hihinana ny fihetsehampontsika ny ray aman-drenintsika
Efa nampinonoan’ny reninao ve ianao nefa tsy noana akory fa tiany fotsiny ianao mba tsy hitomany intsony ?
Efa nahazo vatomamy na sokola avy tamin’ny ray aman-dreninao ve ianao mba hanambatambazana anao ?
Efa nampitahotra anao fa tsy hahazo sakafo ianao raha tsy manao izay tiany ve ny rainao na ny reninao ?
Efa noteren’ny ray aman-dreninao hihinan-kanina izay tsy tianao akory ve ianao ka lasa tsy tia maizina iny sakafo iny ?
Voatosiky ny ray aman-drenintsika, tsy niniana, isika mba hampifandray ny sakafo amin’ny fihetsehampontsika. Mamorona fifandraisana ratsy amin’ny sakafo izany : lasa « mihinana ny fihetsehampontsika isika ». Ohatra : ny fampinonoana zaza mba hampangina azy tsy hitomany intsony dia mampianatra azy hampifandray ny rononon-dreniny amin’ny fahasambaran’ny eo anilan’ny reniny izay manambitamby azy. Noho izany, hino izy fa mba hanambatambazana azy dia mila mihinan-kanina izy. Mitovy amin’izay ihany : rehefa zarina omena vatomany na sokola ny zaza iray mba hanambatambazana azy, dia hitady ireny sakafo ireny foana izy rehefa malahelo, kivy, na tezitra, …
Noho izany, mi-compenser ny olantsika amin’ny sakafo isika, sady tsy miraharaha akory ny filan’ny vatantsika. Ary matetika, terentsika ny manodidina antsika hanaraka izany fihetsika izany. Oh : Terentsika ny namantsika ho zara raha hisakafo satria mihevitra isika fa matavy loatra isika (isika izay manery fa tsy ilay namana).
Hadihadio ny manosika anao hihinana ny fihetsehamponao
Nampinono anao mba tsy hitomanianao intsony ve ny reninao, na dia tsy noana aza ianao ?
Nanome sakafo anao ve ny reninao/rainao mba hanambatambazana anao ? Oh : Nanome anao vatomamy na sokola izy mba tsy hitomanianao intsony.
Mamindra ny fitebitebintsainao momba ny vatanao amin’ny manodidina anao ve ianao ? Oh : « Aza zara raha misakafo toa an’io ! » na « Mba mihinàna vary bebe kokoa e ! ».